आज बुधबार तपाईंको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुस् राशिफल - IpmSamachar
श्रीशाके १९४२ नेपाल सं. ११४१ श्रीसूर्योत्तरायणे शिशिर ऋतु प्रमादीनामक संवत्सर वि.सं. २०७७ माघ ७ गते तद् अनुसार सन् २०२१ जनवरी २० तारिख बुधबार पौष शुक्लपक्ष सप्तमी तिथि १३ः३७ पर अष्टमी तिथि रेवती नक्षत्र १३ः२४ पर अश्विनी नक्षत्र सिद्धि योग भद्रा करण आनन्दादिमा उत्पात योग चन्द्रमा १३ः२४ बजेसम्म मीन राशिमा त्यसपछि मेष राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ६ः५७ मा र सूर्यास्त साँझ १७ः३३ मा हुनेछ ।
बृष – दौडधुप बढ्नेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरेर आफ्नै बलविवेकले काम गर्नु हितकर रहला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ ।
तुला – धनको आगमन भैरहनेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । सुख समृद्धि मान पुरस्कार आदिमा बिघ्नबाधाको डर रहला । मिठो भोजन खान पाउनुहुनेछ । अरुसित मिलेर काम गर्नु बेस रहला तर अरुको भरमा बस्नु र बिबादमा पर्नु उचित हुने छैन ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने छ । ऋण, रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुहोला ।